Banyere Anyị - Fujian Golden Bamboo Industry Co., Ltd.
Fujian Golden achara ụlọ ọrụ Co., Ltd.
e hiwere na 2011 na-ekpuchi ebe ndị 133,400 square mita. Factorylọ ọrụ a dị na Nanjing obodo, obodo Zhangzhou ， Fujian mpaghara bụ ebe kachasị mma maka uto achara. Ọ bụ ụlọ ọrụ achara ọhụrụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ebumnuche nke "ịkwalite usoro nchedo gburugburu ebe obibi ụwa na ibelata oriri nke akụrụngwa".
Ndị otu anyị nwere ndị ọkachamara 10 bụ ndị raara onwe ha nye na recololidated to achara research, 11 ndị nrụpụta kachasị elu, ndị ọrụ ntanetị 26. REBO bu aha akara aka, etinyere aka na igbasa omenaala omenala achara na ibi ndu ohuru. Dị ka n'èzí achara decking soplaya, esenidụt ahịa ekpuchi US, EU, Mideast, Australia, Asia, South America, wdg
11 ndị na-ese ihe kachasị elu
Ndị ọkachamara 26
REBO (Fujian Golden Bamboo Industry Co., Ltd) bụ ọkachamara na R&D, mmepụta, na ahịa nke eriri achara a kpara akpa, ala, mkpuchi mgbidi, ịnyịnya kwụ ọtọ, osisi, joist, ngere, wdg.
Ngwaahịa nwetara fọrọ nke nta Ihe ntinye ikike nke mba 100 na ikike nchọpụta bara uru ma nwee klas 1, jiri klas 4, mmeghachi ọkụ Bfl-s1, Formaldehyde Emission E1 standard, Nkwado nguzogide nkwanye ugwu ma jiri ya n'ogige, ogige, nkwari akụ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ na ọfịs, ụlọ ọrụ, wdg.
A na-etinye REBO ka ọ bụrụ njikarịcha bamboo plank na mmelite ya na ebumnuche akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi. N'ihi na nke kacha durabiIity ， nchekwa na akụrụngwa anụ ahụ ndị ọzọ, eriri bamboo a kpara akpa bụ ezigbo ihe nnọchi anya nke WPC na osisi mgbochi ire ere．